कुलमानको कमाल, भारतमा बेचियो नेपाली विजुली -
कुलमानको कमाल, भारतमा बेचियो नेपाली विजुली
काठमाडौं। नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण निरन्तर घट्न थालेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले भारतवाट दैनिक डेढ घण्टा मात्र विजुली आयात गरिएको छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिगं भोग्दै आएका काठमाडौंका बासीन्दा अहिले निरन्तर विजुली बाल्न पाइरहेका छन् । त्यो पनि भारतवाट आयात गरिएको विदुली घट्दो क्रममा छ।
आजकाल साँझ दैनिक एक-डेढ घन्टामात्र बिजुली आयात भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। उनले जाडो सुरु भएपछि आयात केही बढाउनुपर्ने हुनसक्ने बताए । गत वर्ष नेपालले भारतबाट २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो। यो वर्ष आयात आधाले घटाउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ।
‘अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष एक तिहाइ घट्ने भएको छ । तर प्राधिकरणले आधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने क्रम जारी रहेकाले लक्ष्य पुराहुने उनले बताए । गत जेठमा प्राधिकरणले निर्माण गरेको त्रिशुली थ्री ए प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। सो परियोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सिंहदरबारबाटै गरे।
अहिले पनि नेपालले दैनिक रूपमा धेरै भएको बिजुली भारतको बिहारमा बेच्ने गरेको छ। कतिपय ठाउँमा बिहारबाट बिजुली आयात पनि हुन्छ। बिहार विद्युत बोर्डसँग बिजुली लेनदेन गर्ने सम्झौता छ। त्यसैअनुसार नेपाल र बिहारले आवश्यकताअनुसार बिजुली लेनदेन गर्छन्।
विदेश जान सोमबार मात्रै ४१० जनाले
प्रधानमन्त्री ओलीले नमस्कार फर्काउन छाडेको डा.
०७७ आषाढ २३ गते मंगलबार ई.
भारतीय गु’प्तचर प्रमुखहरु काठमाडौंमा, ककसलाई भेटे
झमकको जन्मदिनमा सरकारद्वारा सम्मान स्वरुप काठमाडौँमा
श’व व्यवस्थापनमा गोरखामा तना’व, चार सेल
मोटरसाइकल किन्ने सुवर्ण अवसर, कुन कम्पनीका
एशियाली विकास बैंकद्वारा नेपाललाई ३६ करोड
पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्य वृद्धि
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कायम गर्‍यो एतिहासिक रेकर्ड
धान दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा